ထမ့်စမ်းဂူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ထမ့်စမ်းဂူ
Posted by weiwei on Mar 22, 2013 in Photography, Travel | 23 comments
wei's photos ထမ့်စမ်းဂူ
ထမ့်စမ်းဂူ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကြီးကနေ ၂၈ မိုင် အကွာမှာရှိပြီး တစ်နာရီကျော်လောက် ကားစီးရင် ရောက်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ပအို့ဝ်လက်နက်ကိုင် အစောင့်အကြပ်များရှိနေခြင်းပါပဲ။ တရုတ်ပြည်က လှိုင်ဂူတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ တရုတ်ပြည်မထဲက လှိုဏ်ဂူတွေထဲ ရောက်ဖူးခဲ့လို့ အဲဒီက ပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီး ထမ့်စမ်းဂူကို ပြုပြင်လိုက်ချင်စိတ်တွေသာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတော့တယ် ….
ဘုရားဖူးများအားလုံးကို သတ်သတ်လွတ် စတုဒီသာ ထမင်း ကျွေးမွေးပါတယ် … အဲဒီနေ့ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ဘိုကိတ်ပဲလိုမျိုးပဲညိုညိုတွေကိုပြုတ်ပြီး သစ်ဥသစ်ဖုတွေရောပြီး မုန်ညင်းစိမ်းရွက်နဲနဲခပ်ထားတဲ့ အရည်ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် … စားကြည့်တော့ အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တာ တွေ့ရတယ် … ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့ မေ့သွားလို့ ပုံတောင်မပြနိုင်တော့ဘူး ..
၂၀၁၄ ဧပြီမှာ ရောက်တုန်းက ..
ဂူအဆုံးက ရေတံခွန်လေး ..
နောက်ဆုံး ၂ ပုံ အသစ်ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ် ။
ဂူတွေထဲမှာ အလင်းရောင်အားနဲလို့ ဓါတ်ပုံတွေ မှောင်နေပါတယ် …
မွေတော်ကက္ကူဘုရားနဲ့ ထမ့်စမ်းဂူကို သွားရတာနဲ့ တောင်ကြီးခရီးစဉ်က သွားဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ … မသွားဖူးရင် တစ်ခေါက်လောက် သွားကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ..
ထမ့်စမ်းဂူ က အသက်ရှူရတာတော့ ကြပ်တယ်ဗျ …
ဒီဂူက လူလုပ်ဂူလို့ ပြောရမလားပဲ ..
အရင်က သူတို့ အောင်းခဲ့တဲ့ နေရာလို့လည်း ထင်မိပါတယ် ..
နောက်ဆုံးမှာ ကန်လိုလို ဘာလိုလို ရေကြီးနဲ့ ပိတ်ထားတော့
ထမ့်စမ်းဂူ ထက် ပင်းတယ ဂူကို ပိုနှစ်သက်သဗျ …
( အဲဒီက ပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီး ထမ့်စမ်းဂူကို ပြုပြင်လိုက်ချင်စိတ်တွေသာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတော့တယ် )
လက်ဘဒေါင်းဂ ချိုင်းနိဒေဂို သွားပင့်လာဘါလားအန်တီရဲ့
မြန်မာပြည်ထဲဂ တရုပ်ဒေ မျက်နှာပွင့်မှာပေါ့
ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး ..
ထမ့်စမ်းဂူက လှသင့်သလောက် မလှတာကို အားမရလို့ … ခရီးသွားတွေကို အခုထက်ပိုပြီး စွဲအောင်မှုရှိအောင် လုပ်လို့ရလျက်သားနဲ့ မလုပ်ထားတာတွေ့ရလို့ ..
တစ်နေ့ တော့ ရောက်အောင်သွားပါဦးမယ်
ထမ်းစမ်းဂူ က တိုး ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရတယ်လို့ သတင်းတခုမှာ တွေ့လိုက်တယ်။
ထမ့်စမ်းဂူ ကို မရောက်ဘူးသေးဘူး။
အထဲက ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေက တော့ တကယ့်ကို အံ့ချီးဖွယ်ပါဗျာ။
ရိုက်တဲ့သူလဲ တော်လို့ထင်ရဲ့ :hee:
လူသားအစတုန်းက လူသားတွေက ကျောက်ဂူထဲမှာနေခဲ့ကြရတယ်…
အခုတော့ လူသားတွေက အိမ်တွေမှာနေပြီး… ကျောက်ဂူတွေကို ပြန်သွားကြည့်ကြပြီ….
ထမ့်စမ်းဂူလို့ ကြားဖူးကာစက ပြည်တွင်းကလို့ မထင်မိဘူး။
ပုံတွေကြည့်မိတော့လည်း နိုင်ငံခြားကလို့ပဲ ထင်နေမိတာ။
ကျောက်ခက်တွေ ကျောက်ပန်းဆွဲတွေနဲ့ လူလုပ်ဂူ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တာပဲ။
ဒါ့ထက် နာမည်က ဘာဘာသာစကားနဲ့ ပေးထားတာလဲ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ မသိဘူးနော်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်လောက်က တရုတ်ပြည် မန်စီက စန်ရှဲတုန့် ဂူထဲကိုရောက်ဖူးတယ်။
ကျောက်စက်ပန်းဆွဲ၊မိုးမျှော်တွေကို မီးရောင်စုံ ဆလိုက်တွေ ထိုးထားပြီး ဂူထဲလည်း သွားရလွယ်အောင်လုပ်၊ဂိုက်တွေလည်းပေးထားတယ်။
ဒေသခံတွေ အမြင်ကျယ်ရင် သဘာဝမပျက် အောင်ထိန်းသိမ်းပြီး သွားရေးလာရေး ကြည့်ရှုလွယ် မှတ်တမ်းတင်လွယ်အောင် ဖန်တီးပေးထားသင့်ပါတယ်။
ပအို့ဝ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက လုပ်သင့်တာပေါ့။
ထမ်စမ်းဂူ က လူလုပ်ဂူ မဟုတ်ပါဘူး ..
လူ……အဲ …..အဲ ………..ဖျက်ဂူပါ ..
နှစ်ထောင်သောင်းချီပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့ မိုးမျှော်ကျောက်စက် တွေက လူတွေ သွားဖို့ ကောင်းကောင်ရှင်းထုတ်ထားတာ ခံလိုက်ရပြီလေ ….
ပြီးတော့ … မပြောတော့ ပါဘူး … သူကြီးဘဲ လာပြောလိမ့်မယ် ….
ဦးကျောက်တို့ လက်အပ်ရမှာ .. :hee:
သူက ဘာရီပို့လုပ်မလည်းဆိုတော့.. မြန်မာပြည်ရဲ့မြင့်သောနေရာတိုင်း.. အဖြူရောင်အုပ်ပုံချွန်တွေ နေရာသိမ်းထားတာအပြည့်နဲ့မို့.. ၀ါယာလက်စစ်ဂနယ်တွေမိဖို့.. တာဝါတိုင်တွေထောင်တာမှာအင်မတန်ဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်ရေးလိမ့်မယ်..။
အဲဒီအုပ်ပုံတွေ.. တိုင်းပြည်ရေးအတွက်.. ဖြိုမယ်ဆို..
သြော် .. သနားလည်း သနားစရာပဲ …
အုတ်ပုံ နဲ့ ကားချပ် တွေပဲ မြင်တတ်တယ် ထင်ပါရဲ့ …
စိတ်ထဲမှာ ရည်မှတ်ရမယ့် သဘောတရားကိုတော့ မသိတဲ့ လူပါတကား …
ဂုဏ်တော် ဘယ်နှစ်ပါး ရှိမှန်းတောင် သိပါ့မလား …
.. ကျွတ် .. ကျွတ် …
ဘဝဟူသမျှ ဒုက္ခချဉ်းသာဖြစ်၏ ထို့ကြောင့် ဘဝဟူသမျှ ဘယ်ဘဝမျှ
( အဲ့သည်စာကို ဘယ်လောက်ရှင်းပြနိုင်သလဲ
မြန်မာပြည်ထဲက ဘယ်ကောင်ကို သေစေခြင်သလဲ
သတ်ပစ်.. သတ်ပစ်..။ :harr:
လူတစ်ယောက်သည် တစ်ခြားတစ်ယောက် နှင့် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ “ခံစားချက်များ၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အိမ်မက်များ” ရှိပါသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လူတိုင်းသည် အရေးကြီးသူ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားပုထိုးတွေ ကို အရေးမကြီးဘူးလို့ တစ်ချို့က ခံစားလို့ရပေမဲ့
ဘုရားပုထိုးတွေ က အရေးကြီးတယ်လို့ အများက ခံစားနေတယ် ဆိုခဲ့ရင် အများသဘောကို လွန်ဆန်လို့ မရပါဘူး။
၀ါယာလက်စစ်ဂနယ်တွေကောင်းရင် တယ်လီဖုန်းတွေကိုလဲ အလကားပေး ဆက်ခကလဲ အင်မတန်ဈေးသက်သာမယ် လို့များ ဆွဲဆောင်ခဲ့ရင်
လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်များ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်ရမှာဘဲ လို့ ပြောမလဲ မသိ။
ဘယ်နှစ်ယောက်က ဘာသာသာသနာ ကာကွယ်ရမယ် ပြောမလဲ မသိ။
ဒီတော့ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အများသဘောဆန္ဒဘဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။
” ဘိုကိတ်ပဲလိုမျိုးပဲညိုညိုတွေကိုပြုတ်ပြီး သစ်ဥသစ်ဖုတွေရောပြီး
မုန်ညင်းစိမ်းရွက်နဲနဲခပ်ထားတဲ့ အရည်ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် …
စားကြည့်တော့ အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တာ တွေ့ရတယ် ”
ထမ့်စမ်း ကိုရင်လေး ကတော့ ၊ ထမင်းစားသွားဖို့ ၊ ပြောရှာသား ။
ဒါပေမယ့် ၊ အချိန်ကလည်း ရှားပါး ၊
စတုဒီသာ ဆိုတော့ အရသာကောင်းမယ်လို့လဲ မထင်မိတာကြောင့် ၊
မ စားဖြစ်ခဲ့ဘူး ။
အမှန်က ၊ ဒေသစာလေး စားကြည့်သင့်တာနော် ။
ကို ငြိမ်းမောင် says:
ထမ့်စမ်းဂူရဲ့ ပုံလေးတွေ တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေလည်း မတွေ့ပါလား.. အဘယ်ကြောင့်နည်း..
ပုံ ၁၃ မှာတွေ့ ရတဲ့ကိုရင် လေးကဒီ ဂူကို တောထဲလျှောက်သွားရင်းတွေ့ ခဲ့တာပါ တဲ့
တောင် ကြီး ၊ဟိုပုန်း ၊ထမ့်ဆမ်းရွာမှာရှိတာပါ ၊ကိုရင် လေးဂူလို့ လဲခေါ်ကြပါတယ်
ဟိုပုန်းဒေသ က ပအိုဝ့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တဲ့ဒေသ ပါ ဒါကြောင့် ပအိုဝ့်လက်နက်ကိုင်တွေ့ ကိုအ စောင့်ထားတာပါ အဲဒီနေရာဆို ဘယ်လက်ကိုင် ဖုန်း
မှမမိပါဘူး ၊ ဘုရားဘူး လာသမျှလူတွေကို ပအိုဝ့်အလှူရှင် တွေက ထမင်းကျွေးတာပါ
ပါတယ် အရသာတော့အရမ်းကောင်းတယ် ။ တိုး တွေမရှိတာက ဒေသခံလက်နက်
ကိုင် အဖွဲ့ ရှိလို့ နဲ့ တူပါတယ် ။မ ရောက်ဖူးသေးရင် အလည်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ပါတယ် ။
ကျ နော် တောင် ကြီး ကို အကြိမ် ကြိမ် ရောက် ပြီး မ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ နေ ရာ နှစ် ခု ရှိ ပါတယ်။
ထမ်း စမ်း ဂူ ရယ် မွေ တော် ကက္ကူ ရယ် ပါ။
Shar Thet Man (73360 Kyats )